Apple က Augmented Reality နဲ့အောင်မြင်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ဘီလီယံရှိတယ် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple သည်နည်းပညာအသစ်များကိုနောက်ကျသည်ဟုစွပ်စွဲလေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်၎င်းသည်အနည်းအကျဉ်းသောဂရုစိုက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသောဒုတိယအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာပထမဆုံးသင်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲပထမဆုံးဖြစ်သည်။ လူတွေကိုအသုံးပြုစေပါ။ Augmented Reality (AR) ကို iPhone နှင့် iPad များသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် Apple သည်လူများကိုဘာလဲဆိုတာသိရန်နှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ပိုကောင်းသည်ဟုထင်ရပြန်သည်.
Developer များအတွက် iOS အတွက် AR application များကိုဖန်တီးရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော ARKit ၏တင်ပြချက်သည်ဇွန်လနောက်ဆုံး WWDC တွင်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ developer များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအချို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်တိုးတက်မှုအချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ IKEA သည်ပင် Apple နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး iPhone 8 ၏နောက်ထပ်တင်ဆက်မှုတွင်သူ၏အချိန်ကာလကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ဆိုင်မှု? ယခုအချိန်တွင်သူတို့သည်သာလက်သည်းများကိုကြည့်ရှု။ ကိုက်ရမည်။
1 ဂူဂဲလ်နဲ့ပရောဂျက်တန်ဂို၊ ဘယ်သူ့ကိုမှတ်မိမလဲ။
3 developer များသော့ချက်ဖြစ်ကြသည်
၂၀၂၅ တွင်ဒေါ်လာသန်း ၁၈၀ ၀၀၀ ခန့်ပြောင်းရွှေ့ရန်ကတိပြုထားသည့်အက်ပဲလ်သည်စီးပွားရေးအသစ်သို့ပထမဆုံးဝင်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်က Google ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး AR ကိုအလောင်းအစားဟုငါတို့ပြောနိုင်သည်။ သူ၏ Project Tango ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် AR မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာများပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်၍ စတင်ခဲ့သည်။။ သင့်အားလုံးလုံးလျားလျားစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲ ၀ င်ရောက်စေသော Virtual Reality (VR) နှင့်မတူသည်မှာ AR သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကမြင်နိုင်သည်ထက်သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာသို့အလွှာတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့် Project Tango ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖတ်လျှင်၎င်းသည် ARKit နှင့်အတူ Apple နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် developer များကမေ့ပျောက်ခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းသည်ချက်ချင်းပင် developer များကလက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်စေသည်တစ်ခုတည်း။ ဤအချိန်တွင် Project Tango နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကိရိယာနှစ်မျိုးရှိသည် (၎င်းသည် Bloomberg မှအာမခံသည်) ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂူဂဲလ်မှချမှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များမှာ Intel မှတီထွင်။ RealSense ဟုခေါ်သည့်အထူး 3D ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android ကမ္ဘာတွင်ကြီးမားသောအပိုင်းအစများနှင့်အတူဂူဂဲလ်သည် (၃) နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်နေသည့်အရာသည်လက်တွေ့တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
အက်ပဲလ်ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာပစ္စည်းဘီလီယံ ၁ ဘီလီယံရှိတယ်။ ၎င်းတို့အားလုံး iOS 1000 သို့မွမ်းမံနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရှေးရိုးစွဲခန့်မှန်းချက်များပြုလုပ်ပြီး ၅၀% ကပြောကြသည်။ iOS 11 ကို (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်တွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည်) ထုတ်ကုန်များ၏ ၈၆% ကို iOS 50 သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဟုစဉ်းစားလျှင်၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပါ။ iPhone 6s နှင့် SE မှ စတင်၍ iPhone မော်ဒယ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့ပြီး iPad Pro, iPad 2017 အားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ Apple သည် iOS 11 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်အခါသန်းပေါင်းများစွာသော Augmented Reality နှင့်လိုက်ဖက်သောစက်ပစ္စည်းများရှိလာလိမ့်မည်။
အမှန်မှာ iPhone 8 (သို့မဟုတ် Pro, သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာဟုမဆို) သည်၎င်းသည်သီးသန့် AR လုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့် 3D ကင်မရာတစ်ခုပါ ၀ င်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်မှာအမှန်ပင်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ဒီပစ္စည်းတွေကကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးနိုင်မှာပါ အနည်းငယ်မုန့်အနည်းငယ် ဒီအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ။ ပြီးတော့ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Apple terminal အသစ်ကိုကြေငြာလိုက်တာကအကောင်းဆုံးပါ။
Apple သည် Pikachu သည် ARKit ကိုအသုံးပြုသော Pokemon Go အသစ်တွင်မည်သို့ကြည့်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ IKEA သည်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ သင်၏ပရိဘောဂများကိုသင့်အိမ်၌ထားခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားကြည့်ရှုရန်သင့်အိမ်၌ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လည်းသိသည်။ စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည်၎င်းကိုအသုံးပြုသော application များကိုဖန်တီးသော developer များထံမှအကူအညီမပါဘဲဘာမျှမဟုတ်ပါ။နှင့်ထိုတွင် Apple က ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ IKEA အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးမကြာမီမည်မျှအသုံးပြုမည်နည်း။
iPhone ကပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းမဟုတ်သလို၊ Apple Watch ကပထမဆုံးစမတ်နာရီလည်းမဟုတ်၊ iPad ကပထမဆုံးတက်ဘလက်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ Apple သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၌ AR ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများအား၎င်းကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခွင့်ပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple မှာ Augmented Reality နဲ့အောင်မြင်ဖို့အကြောင်းပြချက်ပေါင်းဘီလီယံရှိတယ်